LibreOffice 4.0 ichavandudza mukuonekwa uye mashandiro | Kubva kuLinux
Iyo inodiwa hofisi suite yemahara software yenyika yave kuda kuburitsa vhezheni 4.0, iyo inosanganisira inonakidza shanduko, kusanganisira mukana we shandisa theme yeFirefox Persona, iko kwekuzvarwa mashandiro ekudzora mharidzo kubva kuApple mobiles uye kwakakosha mashandiro ekuita uye rutsigiro rwemhando dzakasiyana.
Pano ndinokuunzira pfupiso yezvinhu zvaro zvitsva, mu zvinyorwa zvekuburitsa(zvichiri kuitika) kubva kuRugwaro rweSvondo wiki iwe unowana iyo yakazara runyorwa uye imwezve tsananguro.
Kushanda kunowedzerwa Impress Remote Kudzora yemafoni eApple. Nezve izvi, zvichave nyore kushandisa nharembozha yeApple kudzora mharidzo.
Sarudzo yakawedzerwa Compress Graphic yeImpress, Calc, uye Draw, haisati yauya kuMunyori. Aya mashandiro anotendera iwe kugadzirisa magirafu, achikubvumidza iwe kuti uchinje saizi yavo (mumapikisheni uye DPI), zvisarudzo, mhando yemifananidzo (0 kusvika 100) mumaJPEG, kana nhanho yekumanikidza (1 kusvika 9) muPNG.
Yakagadziridza mhando yemifananidzo inopinzwa mumagwaro
Nani kusangana pamwe neyepasi rese Kubatana menyu uye panguva imwechete neHUD.
Iyo dialog yekusarudza masitaira inokutendera iwe kuti utarise chimiro chekutarisa
Firefox Munhu Tsigiro
Nokuda kweizvi tinofanira kuenda Zvishandiso -> Sarudzo -> Kuita munhu -> Sarudza Munhu . Iyo dialog icharatidzwa kwatiri iyo ichatibvumidza isu kuisa iyo URL yemusoro wenyaya watinoda kushandisa.
Yakawedzerwa rutsigiro rweMicrosoft Visio mafaera, ikozvino inotsigira ese mavhezheni eVisio kubva kuVisio 1.0 1992 kusvika Visio 2013.
Yakagadzirirwa kuongorora uye kutamba mafaira emultimedia kubva kuLinux mune Impress mharidzo. Tsigiro yeGstreamer 1.0 inosvikawo.
Hunhu hunoratidzwa nemagrafu uye kuendesa kunze kune PDF kunatsiridzwa.
Optimizations mune sosi kodhi uye kubviswa kwerutsigiro rwekuendesa kunze kune maficha asisina basa, senge Hofisi 95 magwaro uye StartOffice 1 kusvika 5.
Bhuku rekero reThunderbird rinogona kuwanikwa kubva kuBase kubva kumatro seDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa zvavo.
4 mhuri nyowani yemahara mafonti inosanganisirwa: Vhura Sans (Kukwira), PT Serif (ParaType), Kunobva Kodhi Pro uye Kunobva Sans Pro (Adobe)
Izvozvi zvave kugona kushandisa imwe misoro yemusoro uye tsoka dzetsoka pane peji rekutanga mune Munyori pasina kushandisa imwe yakasarudzika peji peji, kuti uwane rumwe ruzivo uverenge Iyi chinyorwa.
Tsigiro yekuunza kunze kwenyika uye kutumira kunze RTF yemasvomhu kutaura kubva kuMunyori.
Tsigiro yekuunza kunze inki zvirevo kubva kuRTF uye DOCX zvinyorwa (zvinowanikwa kana uchishandisa Shoko kubva pahwendefa)
LibreOffice 4.0 ichiri mudanho rekuvandudza, ndinonzwisisa kuti yatove mumabhuku eUbuntu 13.04, saka zvinoita sekunge ichave yagadzirira muna Kubvumbi anotevera. Ngatimirirei vhezheni itsva, iyo inovimbisa zvakawanda.
Munyori wechinyorwa: Jacobo Hidalgo Urbino (aka Jako) kubva munharaunda vanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » LibreOffice 4.0 ichavandudza mukuonekwa uye mashandiro
Ini ndinoda shanduko mukushanda pamusoro pechitarisiko.
Kana angowanikwa chete ndinozviitira ini diki «pacman -S libreoffice»
Ivan Barra akadaro
Chokwadi ndechekuti ndinoda menyu senge Microsoft office, pachangu ndinoiona ichishanda, inoshanda uye inonzwisisika, asi pamwe izvo hazvigone nekuti zvirokwazvo dhizaini iyi ine patent.
Pindura kuna Iván Barra
Ribbon? Ehe, iro dhizaini rakanakisa.
Ndokunge, Ribhoni, chikonzero chese chiri munyika. Ini ndinonyatsoda dhizaini iyi zvakanyanya uye komuredhi pazasi ari kurudyi, AutoDesk, Winzip nevamwe zvandisingarangariri kuishandisa, saka handifunge kuti ine kodzero.
Ini handizive kana iine patent, asi zvakare inoshandiswa ne autodesk, asi pachezvangu, ndinoda zvimwe shanduko yemifananidzo.
Zuva ravanoisa iribhoni rinosemesa muhofisi yemahara, ini ndichatanga kutsvaga imwe suite ...
Ini pachangu, ini ndinoda chinongedzo icho LibreOffice inobata parizvino, iri retro, yakanaka uye isina maturo uye zvakatonyanya saka ikozvino kuti isu tinogona kuisa dingindira (vanhu) sezvatinoita muFirefox, asi chii chingaipe zvishoma mutsauko, chimwe chinhu chingachipa icho icho Yemahara Software mweya mweya werusununguko ungangove wekuti isu tinogona kuchinja icon icon.
Zvishandiso -> Sarudzo -> Kuita munhu -> Mifananidzo
Uchishandisa osx, unogona chaizvo kushandisa iwork.
Handidi ribbom, ndinosarudza menyu inogadziriswa
Iyo interface nyaya ine nharo kwazvo, vanhu vazhinji vanobvunza shanduko uye kune vamwe vanofarira nzira yacho.
Ini pachangu, handisi kutsigira Ribon, kutanga kuti ini handifarire kuti ivo "vanoteedzera" Microsoft uye chechipiri kuti neMS-Office neRibon yayo ini handisati ndazviwana ini uye ndinopedzisira ndavekushandira Libre-Hofisi.
Zvirinani kuisiya sezvazviri uye wobva wawedzera maficha, kusanganisira kugadzirisa kwemifananidzo nemamenyu.
Ndiri kufa kuti ndione ... asi ndinoda kubatanidzwa zvirinani kwemafaira edoksi (ini handina basa nevakachengetwa) nekuti zvinhu zvakawanda zvinokanganisa kana kuchinja chinzvimbo mune aya mafomati.
Zvizere bvumirana. Inofanira kunge yakaita seiyi pakati pe "mahara" masutu (semuenzaniso: pakati peCalligra neLibreOffice). Gwaro rimwechete reODT rinotaridzika rakasiyana zvachose muMunyori neMazwi.
Nezve DOCX, zvakafanira zvakakwana futi. Shanduko isina musono pakati pe "ese matatu" (Ndiri kutaura nezve Micro & Soft Office, LibreOffice uye Calligra Suite) zvingave zvinopfuura zvinodikanwa.
Kuenderana kwemafomati efaira zvirokwazvo kwakakosha kwazvo, uye chimwe chinhu chingakurudzira vazhinji kuti vaedze chimwe chakasiyana uye chemahara.
Ivo vanongoda shanduko yemifananidzo, iwo ma icon haakwezvi kwandiri pachezvangu, asi ivo vanochengeta echinyakare kutaridzika pasina ribhoni.
Ini ndinofunga chakanyanya kukosha kwandiri ndechekuvandudza kuenderana neMS mafaera, kunyanya munzvimbo yandiri kushanda. Nekudaro, ini handirambe kuti kusimudza kumeso kwaizodiwa. Kutanga, kugona kuchinja maacon (sezvakataurwa nevamwe) zvingave zvakanaka.
Ndinoifarira zvakanyanya, ndinosarudzawo shanduko yakanaka yemifananidzo Ribon kana kwete Ribon pese pandinoda suite iyi handimbokundikana uye laburo yaigara ichibuda mu10
Hapana chakaitika pakupedzisira neCitrus kunyangwe zvaizove zvakafanana neiyo google maodhi.
Mariano Gaudix akadaro
Verenga iyi nhau.
Apache OpenOffice 4.0 inotora kusvetuka kukuru, kubheja zvine simba nekubatanidzwa kwebarbar rekumusoro nyowani rinozoita kuti zvive nyore, zvinakidze, zviite uye nekukurumidza pakutsanangura zvinhu zvezvinhu zvemagwaro edu (hunhu, ndima, mapeji, mifananidzo, matafura, nezvimwewo), uye izvo zvinotsiva izvo zviripo maturusi.
Pindura Mariano Gaudix
Kana zvirizvo, pakupedzisira vanobatsirwa ndivo vanozove isu vashandisi. LibreOffice uye OpenOffice zvinogoverana hunhu, saka kana vachizviita muApache OpenOffice 4.0, ivo vangakurumidza kuitora kune mumwe wavo.
Musiyano chete une LibreOffice uye OpenOffice. Iwo marezinesi.
Iyo Apache uye BSD rezinesi inobvumidza kushandiswa kwekodhi. Mushandisi anoshandisa kana kushandura kodhi yeimwe Apache kana BSD chirongwa chakapihwa rezinesi. Unogona kuishandura kuita kodhi yakatorwa mune yakavharwa sosi. Iwe unongofanirwa kupa mushumo weshanduko dzawakaita asi hausungirwe kupa kodhi yawakanyora kana kushandurwa.
Rangarira kuti APPLE yakatora iyo BSD kodhi kugadzira iOS uye Mac OS.
Zvakanaka, ini handisi nyanzvi panyaya iyi, asi ndinofungidzira kuti padanho rekodhi imwe mutsauko inofanira kunge yatove nayo, saka zvine musoro kuti zviitwe kutakura mapurojekiti maviri akafanana. Ini handifunge kudaro .. Zvisinei hazvo sezvandataura, handisi nyanzvi pane idzi nyaya 😀
Misiyano iri kuzocherechedzwa izvozvi, sezvo Apache OpenOffice sezvazvinenge zvichizotora mukana wakapihwa IBM kodhi kubva ku lotus.
Kune rimwe divi, iyo graphical interface yeOpenOffice neLibreOffice yakanyorwa nemaraibhurari eVCL, maraibhurari akanyorwa muC ++ ayo asingaenderane neGtk 3.6 uye Qt 4.9 …… .. Ndosaka mawidget eLibreOffice asina KDE aesthetic 4.9 (Qt 4.9) kana GNOME 3.6 (Gtk 3.6).
Ndanga ndichitaura naMichael Meeks kubva kuLibreOffice (libreoffice@lists.freedesktop.org) ………. Ndakamubvunza kana vaine API yemaraibhurari eVCL ayo LibreOffice anoshandisa ……. Vakapindura kwete…. Ivo chete vane ruzivo rwevatsva programmers… vakandipa iyi …… ..
https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. mune ino link zvinoratidzwa maitirwo emaraibhurari eVCL uye mashandiro awo…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Ndinobvumirana newe.Elav OpenOffice neLibreOffice mapoinzi akakosha eGNU / LINUX kuwana nzvimbo paMICROSOFT monopoly.
Kana isu tine hofisi suite, inoshanda, yakagadzikana, iyo inokwezva vashandisi (aesthetics).
Ini ndinotenda kuti mikana ichavhurika yeGNU / LINUX uye nharaunda kuti ikure.
Kuwana mugove wevashandisi mumusika wekushandisa masisitimu. Ndozvandinorota kanenge
Ini handizive kana chingave chiri chipenga zano asi hazvingabatsire here kuti munhu wese achinje maVLibhurari uye nekunyorazve chimiro uchishandisa Qt?
Kana Elav kufunga kwako kuri kwechokwadi uye kwaizogadzirisa zvese.
Unofanira kunyora zvekare maraibhurari ese eVCL kuti aenderane neGtk 3.6 kana Qt 4.9, ibasa rakakura …………… Semuenzaniso, PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA, nezvimwe semuenzaniso ita kuti maraibhurari avo aenderane ne Gtk 3.6 kana Qt 4.9 ibasa rakanaka asi vanoita.
Iri ibasa rakakura kwazvo kugadzirisa VCL kuti ive Gtk 3.6 kana Qt 4.9… asi ndinofunga zvingave zvakakosha.
Semuenzaniso pane iyo Gtk peji ivo vanokuudza iwe kuti ndeapi mapurogiramu mitauro ane rutsigiro rweGtk.
Mune mamwe mazwi, mutauro kana maraibhurari anoenderana neGtk (GNOME) uye anoenderana nawo.
Ichi chikonzero nei mamwe maGNU / LINUX mapurogiramu aine chinotyisa graphical interface.Iyo nekuti graphical interface yechirongwa ichi haienderane neGtk (GNOME) kana Qt (KDE).
Picasa kana Google widget inotaridzika zvinotyisa paGNU / LINUX nekuda kwechikonzero icho.
LibreOffice 4.0 haisi munzvimbo dzeUbuntu (nekuti haisi muDebian futi; Rene / Björn vari pairi). Ndiani akakuudza neimwe nzira? Zvido.
Mozilla inozivisa mafoni ekutanga neFirefox OS yevagadziri